विभिन्न जिल्लामा मतगणना, वाम गठबन्धनको अग्रता, हेर्नुहोस् कसको कति मत ? - samayapost.com
विभिन्न जिल्लामा मतगणना, वाम गठबन्धनको अग्रता, हेर्नुहोस् कसको कति मत ?
समयपोष्ट २०७४ मंसिर २२ गते ४:५४
यहाँ मंसिर १० गते सम्पन्न पहिलो चरणको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको बैतडीमा मतगणना जारी रहेको छ ।
कुल १३ हजार ५०८ मत गणना हुँदा आज बिहान ६ बजेसम्म को मतपरिणामअनुसार एमालेका दामोदर भण्डारीले ६ हजार ९७२ र नेपाली काँग्रेसका नरबहादुर चन्दले पाँच हजार २६९ मत प्राप्त गरेका छन ।
यस्तै प्रदेशसभा ख मा नेकपा एमालेका लीलाधर भट्टले ६ हजार ४५३ र राप्रपाका गणेश चन्दले चार हजार ८५७ मत प्राप्त गरेका छन । एक लाख ३२ हजार ३१९ मतदाता रहेको बैतडीमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ७६ हजार ३४३ मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभामा एमाले–माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा एमालेका भूपेन्द्रबहादुर थापाले अग्रता कायम गरेका छन । बिहान ५ बजेसम्मको मतपरिणामअनुसार थापाले ११ हजार ८९३ मतसहित अग्रता कामय गरेका हुन । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकाका खुमबहादुर गर्वुजा, खम्वीरले १० हजार ५६ मतसहित थापालाई पछ्याई रहेका छन ।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा कमा वाम गठवन्धनका उम्मेदवार नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का विनोद केसीले सात हजार ४० मत प्राप्त गरेका छन भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट राप्रपाका भीमप्रसाद गौचनले ६ हजार १९० मत प्राप्त गरेका छन ।
मंसिर १० गते खोटाङमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ । बिहीबार बेलुका साढे सात बजेदेखि शुरु गरिएको मतगणनामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता कायम रहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य क्षेत्र नं १ ९क०मा वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एमालेका राजन राईको दुई हजार ९१८ र नेकाका सुवासकुमार पोखरेलको एक हजार ६९४ मत रहेको छ ।
यस्तै, प्रदेशसभा २ ख मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामकुमार राई ९पासाङ०को तीन हजार ४९१ र नेकाका विष्णुकुमार राईले एक हजार ९५० मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, यहाँ बिहीबार साँझ ५ः३० बजेदेखि संखुवासभाको निर्वाचन मतगणना शुरु गरिएको छ । मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभा नेकाका उम्मेदवार दीपक खड्काको एक हजार १४६, साझा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमको एक हजार ६९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश नंं १ संखुवासभा क मा नेकाका टंकप्रसाद राईको ८०७, साझा वाम गठबन्धन माओवादी केन्द्रका पूर्णप्रसाद राई एक हजार ३४४ मत प्राप्त गरेका छन् । भने प्रदेश नं १ संखुवासभा ख का नेकाका दीपक लिम्बूको ९१७, साझा वाम गठबन्धनका एमालेका तुलसीप्रसाद न्यौपानेले एक हजार ७० मत प्राप्त गरेको बिहान ४ बजेसम्मको पछिल्लो मतगणना सार्वजनिक गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश राउतले जानकारी दिए ।
सोलुखुम्बुमा प्रतिनिधिसभा र दुईवटै प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनले अग्रता कायमै राखेको छ । मतगणना शुरु भएसँगै अग्रता लिएको वाम गठबन्धनले अहिले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।
यस्तै, प्रदेश क मा वाम गठबन्धनका उत्तमकुमार बस्नेतले तीन हजार २४९ मत प्राप्त गर्दा नेकाका प्रकाशसिंह कार्कीले एक हजार ९७९ मत प्राप्त गरेका छन । प्रदेश सभा ९ख०मा वाम गठबन्धनका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले तीन हजार ४६५ मत प्राप्त गर्दा नेकाका आङगेलु शेर्पाले दुई हजार ७९० मत प्राप्त गरेका छन् ।
लमजुङमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा १४ हजार ८१६ मतगणना हुँदा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङले अग्रता लिएका छन । गुरुङले ६ हजार ९४७ मत ल्याउँदा नेकाका उम्मेदवार दिलबहादुर घर्तीले ६ हजार ९१४ मत ल्याएका छन ।
यस्तै, प्रदेशसभा क र ख दुवैतर्फ वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । प्रदेशसभा कमा सात हजार ५१३ मतगणना हुँदा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार धनन्ञ्जय दवाडीले चार हजार ३९३ मतले अग्रता लिएका छन् । दवाडीलाई काँग्रेस उम्मेदवार गर्जबहादुर गुरुङले दुई हजार ९०६ मतले पछ्याएका छन् ।
प्रदेशसभा ९ख०मा पनि वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । काँग्रेसका कृष्णप्रसाद कोइरालालाई पछि पार्दै एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अग्रता लिएका छन् ।
गुरुङले तीन हजार ९०३ मत ल्याउँदा कोइरालाले तीन हजार ५४५ मत ल्याएका छन । एक प्रतिनिधि र दुई प्रदेशसभा रहेको लमजुङका एक लाख १५ हजार ४४९ मतदाता रहेकामा ७७ हजार ३४० जनाले मतदान गरेका थिए । प्रदेश सभा ९क०मा ३६ हजार ६८ र प्रदेशसभा ९ख०मा ४१ हजार २७२ मत खसेको थियो ।
मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको रोल्पामा बिहीबार बेलुकादेखि शुरु भएको मतगणनाको पछिल्लो नतिजाअनुसार वाम गठवन्धनका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन् ।
बिहान ८ बजेसम्मको मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र का उम्मेदवार वर्षमान पुनले पाँच हजार ५१ मत प्राप्त गरेका छन ।
प्रदेशसभा कमा वाम गठबन्धनका तर्फवाट नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का कुलप्रसाद केसीले एक हजार ८९४ मत प्राप्त गरेका छन । यसैगरी, लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट नेकाका उम्मेदवार शेरबहादुर महराले एक हजार ४९७ मत प्राप्त गरेका छन् । सो क्षेत्रमा तीन हजार ९४३ मतगणना भइसकेको छ ।
प्रदेश सभा ख मा वाम गठबन्धनका तर्फवाट नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का उम्मेदवार दीपेन्द्र पुनले तीन हजार ७११ मत प्राप्त गरेका छन् ।
सो क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनको उम्मेदवार बनेका नेकाका खगेन्द्रप्रकाश हमालले ८६१ मत प्राप्त गरेका छन । सो क्षेत्रमा पाँच हजार २५ मतगणना भइसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रोल्पाले बताएको छ । रासस